Xog: Imisa qof ayaa madaxda maamul goboleedyada loo ogolaaday inay u raacaan shirka London? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Imisa qof ayaa madaxda maamul goboleedyada loo ogolaaday inay u raacaan...
Xog: Imisa qof ayaa madaxda maamul goboleedyada loo ogolaaday inay u raacaan shirka London?
Muqdisho (Caasimada Online) – Dhawaan waxaa la filayaa in Magaalada London ee Caasimadda dalka Ingiriiska uu ka furmo shirka looga hadlayo arrimo Soomaaliya oo ay hormuud u tahay dowladda Federaalka Soomaaliya.
haddaba Caasimadda Online ayaa heshay xog ku saabsan tirada Madaxda Maamul Goboleedyada loo ogolaaday inay wataan shirka London oo lagu tilmaamay inuu yahay shir aad muhiim ugu ah Soomaaliya.
Madaxwyene Kasta oo kamid ah Maamul Goboleedyada dalka ayaa waxaa loo ogolaaday inuu horey u wato 2 shaqsi oo uu isaga seddex ku yahay, waxaana arrintaas isla og dowladda dhexe iyo Maamul Goboleedyada.
Dowladda dhexe waxaa u matali doono Madaxweynaha Soomaaliya oo horkici doono wafdi heer sare ah, sidoo kalana waxaa ka qeyb geli doono dhammaan Madaxda Maamul Goboleedyada, waxayna isku darka wufuudda loo ogol yahay Maamul Goboleedyada noqoneyaa ilaa 15 shaqsi oo ay ku jiraan Madaxweynayaasha.
Go’aankaan ayaa waxaa soo saartay Dowladda Soomaaliya oo guddoomiyaha guddiga shirka ka dhigtay Cabdiraxmaan Ceynte.